Oggolaanshaha Hore ee Caafimaadka Jirka - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Ogolaansho hore > Oggolaanshaha Hore ee Caafimaadka Jirka
Helitaanka foomamka la xiriira caafimaadka jirka iyo qalabka caafimaadka ee oggolaanshaha ka hor.
Dib u eeg tilmaamaha isticmaalka caafimaadka iyo qalliinka ee muuqaalka guud ee adeegyada u baahan oggolaansho hore.
➔ Liiska Ogolaanshaha Hore ee Caafimaadka iyo Qalliinka iyo Tilmaamaha Isticmaalka
Nidaamyada qaarkood waxay u baahan karaan oggolaansho hore sida kuwa baaritaanka hidda-socodka ee aan la xiriirin uurka, bukaan-socodka iyo adeegyada gaarka ah, ku-tallaalida, sawirka / shucaaca, qalliinka, iyo adeegyada bukaan-jiifka. Daaweynta ku xiran rukhsadda hore waxaa ka mid ah qalab caafimaad oo raagaya, daawada jirka lagu qaato, sahay caafimaad, adeegyada baaritaanka tijaabada ah iyo daroogada, kalkaalinta caafimaadka ee gaarka loo leeyahay iyo caafimaadka guriga.
Markaad gudbineyso codsi oggolaansho hore mid ka mid ah tusaalooyinkaan, waa inaad soo gudbisaa dukumiintiyo ku habboon si aad u taageerto go'aan gaarista oo aad ugu muujiso baahi caafimaad.
Dukumintiyada la xiriira waxaa ka mid ah:
Taariikhda bukaanka ee hadda jira iyo / ama qoraallo baaritaan jireed oo muujinaya dhibaatada
Natiijooyinka shaybaarka khuseeya ama shucaaca
Dawooyinka si xirfad leh loo maamulo
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu ubaahanyahay ogolaansho hore dawooyinka qaarkood ee sida xirfada leh loo maamulo. mcg tilmaamaha waxaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo baahida caafimaad ee maqnaanshaha Shuruudaha Caymiska Caafimaadka ee CHPW.
Halkan guji si aad u aragto Daroogooyinka Maamul ahaan loo Maamulay iyo Faa'iidooyinka Daroogada ee Caafimaadka
Qalab caafimaad oo waara iyo qalab kale
CHPW waxay tixgelineysaa qalabka caafimaadka ee joogtada ah (DME), orthotics, iyo qanjirka 'prosthetics' caafimaad ahaan lagama maarmaan marka shuruudaha ku habboon la buuxiyo. Waxyaabaha DME waxay leeyihiin astaamaha soo socda waana inay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
Waxaa qoray dhakhtar
Amarku wuxuu ka kooban yahay saxeexa dhakhtarka, ee maahan shaabad
Adkaysan kara isticmaalka soo noqnoqda
Loogu tala galay asal ahaan iyo caadiyan in loogu adeego ujeedo caafimaad
Ay ku habboon tahay in loogu isticmaalo macmiilka meeshiisa ama deggenaanshihiisa
Buuxiyo qeexitaanka DME
Ka reeban: Amarka DME waxaa saxeexi kara bixiye aan ka ahayn dhakhtar xaaladaha qaarkood.
Maamulka dawada ama kormeerka (sida baaritaanka gulukoosta dhiigga, kormeerka gulukooska ee joogtada ah, ama bambooyin insulin), ama faleebo guri
Qalabka neefsashada (sida maaskaro CPAP ama tubbada)
Codsiyada DME inta xubintu kujirto xarun (SNF, Bukaan-jiifka Bukaan-jiifka, Daryeelka Ba'an ee Muddada Dheer ama isbitaal). Saxiix ayaa looga baahan doonaa xubnaha ku jira daryeelka xannaanada, guriga qaan gaarka, ama daryeelka muddada-dheer.
Tixgelinno gaar ah
Kiro: CHPW waxay raacdaa tilmaamaha HCA iyadoo adeegsanaysa khidmadaha kirada ee DME marka ugu dambeysa ee qalab la iibsado. (Qaar ka mid ah DME ayaa loogu talagalay oo keliya iibsiga. Sharciyada la xiriira kirada iyo iibsiga waa in la hubiyaa.)
Dayactirka DME kasta waa inuu buuxiyaa shuruudaha ku habboon ee daruuriga caafimaadka, oo ay ku jiraan oggolaansho hore haddii loo baahdo qalab cusub oo la mid ah.
Dayactirka waxaa loo tixgeliyaa kaliya qalabka ay leeyihiin macaamiisha ka dib marka uu dhammaado muddada damaanadda. Dayactir kasta oo loogu talagalay DME waa inuu buuxiyaa shuruudaha ku habboon ee daruuriga caafimaadka, oo ay ku jiraan oggolaansho hore haddii loo baahdo qalab cusub oo la mid ah.
Waa masuuliyada bixiyaha inuu hubiyo daboolida damaanada kahor intaadan gudbin codsi ku saabsan dayactirka DME. Daboolida damaanada ayaa dib loo eegi doonaa, iyo kharashka dayactirka, waqtiga qiimeynta ogolaanshaha hore.
Dayactirku uma baahna qiimeyn waji ka waji ah oo lala yeesho dhakhtarka laakiin waxay u baahan yihiin saxeex dhakhtar amarka.
Beddelka DME kasta waa inuu buuxiyaa shuruudaha ku habboon ee baahida caafimaad, oo ay ku jiraan oggolaansho hore haddii loo baahdo qalab cusub oo la mid ah.
Codsi kasta oo loogu talagalay beddelka DME waa inay ku jiraan dokumentiyo hadda jira (3 bilood gudahood) qiimeyn fool-ka-fool ah oo ay sameeyeen dhakhtarka daweynta iyo daaweeyaha, sida ku habboon, oo muujinaya baahida caafimaad ee aaladda xubinta.
CHPW ma bixiso lacagta beddelka qalabka, aaladaha, ama sahayda, kuwaas oo la iibiyey, hibo loo siiyey, lumay, jabey, burburiyey, ama la xadey iyadoo ay sabab u tahay taxaddar la'aanta macmiilka, dayacaad, taxaddar la'aan, ula kac ula kac ah, ama si xun u adeegsi haddii aan si kale loo oggolaan ku hoos jira xeerarka barnaamijka HCA.
Foomka Ogeysiiska Dialysis
Habka Codsiga Xarunta Kalkaalinta ee Xirfadaysan (SNF)